Caalamka, 26 October 2018
Khamiis 26 October 2018
Erdogan oo Sacuudiga ka dalbaday meydka Khashoggi
Madaxwenaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta ku booriyey Sacuudiga inay shaaca ka qaadaay halka uu yaallo meydka suxufiga Sacuudiga ee la dilay Jamal Khashoggi.
Sacuudiga: Dilka Khashoggi wuu qorsheysnaa
Dowladda Sacuudiga ayaa mar kale beddeshay sharaxaadeeda dilka suxufi Jamal Khashoggi loogu gaystay gudaha qunsuliyadda Riyadh ee Istanbul, waxaana markan ay sheegtay in dilka uu ahaa mid hore loo sii qorsheeyey.
Najib Razak oo dacwado lagu soo oogay
Ra’iisul wasaarihii hore ee Malaysia Najib Razak iyo madaxiisii hore ee lacagta ayaa lagu soo oogay dacwado ku saabsan inay si qaldan u maareeyeen 1.6 bilyan oo dollar oo hanti dadweyne ah.
Kanada: Soomaali loo doortay golaha deegaanka Victoria
Golaha deegaanka ee magaalada Victoria ee dalka Kanada, ayaa waxa dadka golaha deegaanka ka soo galay ka mid noqdey Sharma'arke Dhuubow oo Soomaali ah.
Sacuudiga: Bin Salman wuxuu la hadlay qoyska Khashoggi
Saudi Arabia ayaa sheegtay in dhaxal-suge Maxamed Bin Salman uu qadka taleefonka kula hadlay wiilka suxufiga la dilay ee Jamal Khashoggi, si uu uga tacsiyeeyo dilka aabihiis.
Raadka Dilka Wariye Khashoggi
Dalka Boqortooyada Sacuudiga ayaa qiray in wariyihii lagu waayay Qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul, Jamaal Khashuggi uu ku dhintay is-gacan qaad Qunsuliyadda gudaheeda ka dhacay, waxeyna ballan qaadday baaritaan dheeri ah oo muddo bil ah socon doona.
Dowladda boqortooyada Sucuudiga ayaa xaqiijisay geerida saxafigii u dhashay dalkaasi ee la baadigoobayay.
Doorashooyihinkii Kandahar oo dib loo dhigay
Guddiga doorashada Afghanistan ayaa muddo toddobaad ah dib u dhigay doorashooyinka baarlamanka gobolka Kandahar kadib dilka laba sarkaal oo sare.
Mas'uuliyiin xilal sare ka hayey Afghanistan oo la dilay
Saddex sarkaal oo xilal sare ka hayey koonfurta dalka Afghanistan oo uu ku jiro taliyaha booliska ee awood badnaa Jeneral Cabdul Raziq, ayaa lagu dilay toogasho dhacday intii lagu guda jiray booqsho uu halkaas ku tegay jeneraalka ugu sarreeya ciidamada Mareykanka ee Afghanistan.
Shirkadaha adduunka oo qaadacaya shirka Riyadh
Shirkadaha iyo hay’adaha ugu weyn ee dunida ayaa qaadacaya shir maal-gashi oo 23-ka illaa 25-ka October lagu qaban doono dalka Saudi Arabia, sababo la xiriira xaaladda suxufiga la lay’ayah ee Jamal Khashoggi.
Musharax baarlamaan oo lagu dilay Afghanistan
Musharax u taagnaa doorashooyinka baarlamanka dalka Afghanistan ayaa maanta lagu dilay weerar bombaano oo lagu qaaday xafiiskiisa, sida ay sheegeen saraakiisha gobolka Helmand.